Indonesia in Focus: Xirmo siyaasadda dhaqaalaha Indonesian ku hardiyi doonaa dhaqaalaha adduunka dhaqan galay
Xirmo siyaasadda dhaqaalaha Indonesian ku hardiyi doonaa dhaqaalaha adduunka dhaqan galay
Kortaan ayaa la ma uusan dhammayn (382)
(Qaybta saddex boqol iyo, Depok, West Java, Indonesia, November 12, 2015 laba-siddeetan, 19:05 pm)
Madaxweynaha Indonesia Joko Widodo ayaa bilaabay xirmo ka kooban lix siyaasadaha dhaqaalaha ayaa la filayaa inay ku dhiiri korodhka maalgashiga gudaha iyo dibadda, iyo koboca dhaqaalaha kicin siman ee Indonesia.
Mid ka mid ah tusaale ahaan marka dhaqaalaha dalka koray 4.5 boqolkiiba sannad kasta, markaas 2015 Waaxda kalluumeysiga waa koray boqolkiiba siddeed iyo waaxda beeraha koray celcelis ahaan in ka badan boqolkiiba 6, xitaa haddii la sii daayo xirmo lixaad siyaasad dhaqaale oo la raaci doono by Wajiga xiga ee baakada siyaasadda dhaqaalaha, ka dibna waxa suurtogal ma aha in 2030 Indonesia dhaafi doono dhaqaalaha ee Australia iyo Koonfur Korea, Indonesia iyo haddeer hore u dhaafto xoogga dhaqaalaha UK oo awood u leh in la kaalinta dhaqaalaha adduunka 9aad.
Hadda waxaa mar kale si xawli ah dhaqaalaha Asia waxaa la wareegaayo saamaynta dhaqaale ee Maraykanka iyo Europe. Taasi waa sababta Maraykanka bilaabay kana dayi wax ka badan Asia oo bilaabay wareegaayo ay dhawaanshaha dhaqaalaha Yurub iyo Bariga Dhexe iyadoo la samaynayo dalalka Poros Trans Pacific Iskaashiga Dhaqaalaha.
Jokowi noqday qabashada Xoog Laba dhidibka World Economic
Beijing - Fulinta shir APEC ee 2014 ee Beijing, China noqday garoonka ayaa waxaa ka mid ah danaha ka dhexeeya awood laba usheeda dhexe ee dhaqaalaha adduunka, Maraykanka ee hal dhinac la Shiinaha iyo Ruushka oo dhinaca kale ah. Madaxweynaha Joko Widodo (Jokowi) ku cusub masraxa caalamiga ah noqday laf dood u dhaxeeya.
Americans biiray Partnership Trans-Pacific (Trans-Pacific Partnership / TPP). TPP waa heshiis ganacsi xor ah taasoo ay sii raacday toddoba iyo toban dal oo Asia-Pacific ayaa sidoo kale ku soo xiga dalalka qaar ASEAN, kuwaas Malaysia, Singapore, Brunei, iyo Vietnam.
Inkastoo Russia galay Asia-Pacific Free Trade Zone (Free Trade Area of ​​Asia Pacific / FTAAP) ah. FTAAP waxaa loo aqoonsan yahay dadaal lagu dhinaca Regional Dhaqaalaha Integration (REI) ee barwaaqo la wadaago gobolka.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Indonesia Joko Widodo sheegay Indonesia ma doonayaan in ay xaq jiido ka mid ah suuqa ugu danaha dhaqaale ee dalalka waa weyn, laakiin waxa ugu muhiimsan waa iskaashi ku siin kartaa faa'iidooyin dhab ah in Indonesia.
"Dabcan, hadii aynu eegno danaha fiiriyaa u bixiyo saaxiibbadiis. Dastuurkeena u gaar ah oo bilaash ah waa firfircoon. Waxaan doonayaa inaan saaxiibo helo qof Dong, halkan here- karaa lahaa. Laakiin iyadoo rikoor danta qaranka, danaha dadka aan hoos-United leeyihiin, "ayuu yiri habeenkii Madaxweynaha Jokowi, Isniintii (11/10/2014).
Dhexdhexaadnimada Jokowi si cad u arki karo marka fadhiga sawirka la madaxda shir APEC ee 2014. Waxaa Jokowi istaagay, taasina ay Madaxweynaha Maraykanka Barack Obama iyo Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping isbahaysi iyo Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin.
"Waxa ay aheyd calaamad, waa in la akhriyo. Waxaan noqday qabashada loh sidaas, "ayuu yiri Jokowi halka macnaha ka dambeeya booska tafaxaydo.
Marka la eego Partnership Pacific Trans ah
Executif Agaasimaha Central Study Of Asia Pacific (CSAP)
Booqashada Jokowi Madaxweynaha Maraykanka kicisaa badan oo la isla dhexmarayo, gaar ahaan tan iyo markii Madaxweynaha ayaa bayaan in ay walaac ka jeclaan lahaa in uu ku biiro Partnership Trans-Pacific (TPP).
Waxaa dad badan rumaysan yihiin in siyaasadda arrimaha dibadda xagga Indonesia ayaa haatan ku sii jeeda dalka Mareykanka.
Laakiin marka laga reebo waxay doonayaan in ay ku biiraan TPP ama ma, waxaan ogahay in maanta in, weelka dalalka ee gobolka Asia Pacific waa mid aad lagama maarmaan u ah iskaashiga iyo horumarinta dhaqaalaha.
"Laakiin marka laga reebo waxay doonayaan in ay ku biiraan TPP ama ma, waxaan ogahay in maanta in, weelka dalalka ee gobolka Asia Pacific waa mid aad lagama maarmaan u ah iskaashiga iyo horumarinta dhaqaalaha"
Ururada Asia-Pacific waa in aan matalin ajandaha siyaasadeed ee dalka gaar ah, laakiin halkii ay ka dhex abuuro dal kasta dareen sinnaanta si ay ka faa'iidaysan karaan dalalka kasta oo xubin.
Sidaas, su'aasha u kacaya inuu u jawaabaan Madaxweynaha ayaa bayaan Jokowi kuwaas oo doonaya inuu ku biiro TPP ku saabsan tahay waxa faa'iidooyinka istiraatiiji ah in la ahbaa kartaa Indonesia?
Ka hor inta jawaabay kiiskan dabcan waxaan u baahan nahay in ay baaritaan qoto dheer oo ku saabsan waxyaabaha ka iman kara waxa ay leedahay Indonesia saaxadda caalamka.
Maanta waannu og nahay in dhaqaalaha caalamka uu yahay ugana qayb ka Atlantic si ay Zaman ee ka qabno Pacific sidan si dadban doorka wadamada Asia-Pacific inay si aad ah loo xisaabiyaa. Iyo Indonesia hadda waa mid ka mid ah waxyaabaha ka iman kara inta badan si uu u noqdo ciyaaryahanka ugu weyn ee gobolka Asia Pacific.
Interest ee dalalka kala duwan ayaa cadeeyay weyso dagaalka dhex marey ciidamada dhaqaalaha caalamiga ah si ay u helaan dareenka Indonesia. Mid ka mid ah waxaa la sameeyaa iyadoo la siinayo noocyo kala duwan oo lacagaha maalgelinta si loo fududeeyo qorshaha horumarineed ee dalka.
Mid ka mid ah booska geopolitical kara ee Indonesia waa mid aad u istiraatiiji ah in ay afar ka mid ah sagaal dhibic ceejiya (cidhiidhi cidhiidhi ah), kaas oo noqday haad badda weyn ee ganacsiga aduunka waa u Strait of Malacca, Sunda Strait, ee Strait of Lombok iyo Makassar Strait.
Isbedelaya dhaqaalaha in gobolka Asia Pacific si dadban la kordhiyo mugga qaybinta alaabta in gobolka Asia-Pacific. Taas ayaa ka dhigaysa wadamada warshadaha sii kordheysa ay ku tiirsan yihiin boos istaraatiijiga ah ee dalka Indonesia.
Marka Indonesia loo diyaariyey kaabayaasha iyo nidaamka qaybinta Dabcan mempuni ku tiirsanaanta dhaqaalaha xooggan sii kordheysa u xoogaysan doonaan.
Tani waxay u arkaan Jokowi la Indonesia sida adduunka badda kiciya pivot. Si taas loo gaaro, Indonesia u baahan tahay horumarinta kaabayaasha badda ku filan.
In ay ku baraarugto dhismaha kaabayaasha badda si cad yahay waxay u baahan yihiin lacag maalgelin weyn. Indonesia u baahan in ay qaataan wadamada in ay ka qayb iyo fursadaha ka mid ah dalka Indonesia sida dhidibka badaha adduunka ee.
Dhinaca kale, waxay ku yaalaan gobolka Asia Pacific in uu muddo dheer soo toosay soliditasnya kuwaas oo ASEAN. Dhinaca kale, Indonesia waa mid ka mid ah dalalka saameynta badan ee gobolka ASEAN in uu leeyahay fursad uu ku dhiso a awoodaha dhaqaale ee cusub ee soo mara Asia Pacific.
ASEAN diirada u adag guulaha dhaqaale ee la cabbiri karo waa cabsi leh noocyo kala duwan oo dalalka awooda badan adduunka. Sidaas darteed, awoodda Indonesia ee in ay isku urursadaan ASEAN go'aamin doona awood gorgortan ee Indonesia ee indhaha u ah ee dunida.
The xoog awood gorgortan ah Indonesia, oo ka sii weyn ay fursad u Indonesia ku hadlin, ururada caalamiga ah.
"Xoog Awoodda gorgortanka ee Indonesia, fursad weyn ee Indonesia ku hadlin, ururada caalamiga ah"
Sidaas darteed, markii aan gaadho dib u Partnership Pacific Trans ka dib tan iyo markii la aasaasay dhab ahaantii loo arko fursad ama khatar ku ah.
Fursadaha guusha ajandaha gudaha laga helayo, laakiin sidoo kale u baahan tahay sharuud midig.
Indonesia waa inay ogaadaan in marka ciyaaro tan oo kale ah ee garoonka ayaa waxaa ka mid ah gobolka guud ahaan waa weli ku xeeldheer ASEAN. ASEAN waa dhibic upka ugu haboon ka hor halkaa la sii galay Iskaashiga Pacific Trans ah.
Sababtoo ah ASEAN ayaa la filayaa inuu "Yurub" ee Asia uu noqon doono xarunta dhaqaale ee Asia Pacific. On wacyi this, haddii Indonesia ayaa doonaya in la ballaariyo iskaashiga arrintan la xiriira in Partnership Pacific Trans ah, Indonesia waa in taxadir leh looga fiirsado ilaa xadka ay Indonesia ayaa booska gorgortanka ee ururka.
Waxaan aragnaa in Partnership Pacific Trans waxaa uu hogaaminayo Mareykanka halkaasi oo taasu waxay noqotay tallaabo dheelli badan Shiinaha ayaa saameyn ee gobolka Asia Pacific.
Caqli marka Indonesia biiray Partnership Pacific Trans waxaa albaabada la furay ee la kaashanayo Maraykanka iyo xulafadiisa.
Waxaa laga yaabaa, taasina been siyaasadda xor ah oo firfircoon ay ka ciyaaraan Jokowi Madaxweynaha. Indonesia Si aad u samayso sida dhidibka dunida badda, Indonesia in ay qaataan dalalka weyn kari karaan in.
Si kastaba ha ahaatee waxaa muhiim ah in la xasuusto in aynaan si deg deg ah ka dhigi kara go'aan in uu ku biiro ama aan la this Partnership Trans Pacific. Sababtoo ah la'aanta ah ee ku saabsan la caddeeyo heshiisyada iskaashiga sida looga qaadan doonaa.
Ugu yaraan waxaa jira laba arimood oo noqon doona ajandaha Iskaashiga Pacific Trans in habaynta ee dhoofinta-dejinta, taas oo macnaheedu yahay balaarinta suuqyada iyo socodka sahlan maalgashiga.
Marka la fiirinayo iman kara Indonesia gudahood maanta waa si dhab ah ugu deg-deg ah u baahan waa horumarinta kaabayaasha badda.
Go'aanka in ama aan si ay ugu biiraan Partnership Pacific Trans ah waa in lagu saleeyaa xoogga Indonesia ee ASEAN iyo sidoo kale taageeraan horumarinta kaabayaasha badda.
Madaxweynaha Joko Widodo ku dhawaaqay xirmo siyaasadaha dhaqaalaha
(BBC) - xirmo siyaasadaha loogu talo galay inay u soo guuraan dib dhaqaalaha
Madaxweynaha Joko Widodo ku dhawaaqay xirmo siyaasad dhaqaale oo ka kooban saddex tallaabo ee Madaxtooyada ayaa Arbacadii (09/09).
Tallaabada saddexaad waxaa ka mid ah boost a in tartan ee warshadaha qaranka iyada oo loo marayo habaynta, sharci fulinta iyo si yaqiin ah ganacsiga.
Madaxweynaha ayaa sheegay in ay jiraan 89 xeerarka hagaajiyo ka jeediyay 154. "Haddaba xoojin karin joogta ah iyo xeerarka la gooyaa oo carqaladeyn warshadaha," ayuu yiri madaxweynaha.
Tallaabada labaad waa in la dardar mashruuca qaran istiraatiiji tiraa xannibaadda, bixinta ruqsadaha, dhamaystirka oo ah qaabka, iyo xawaaraha ee alaabta iyo adeegyada.
Ugu dambayn, madaxweynaha oo doonaysa in ay kordhiso maal-gashiga ee qaybta hantida.
"Xirmada siyaasad dhaqaale oo horumari doona qaybta dhabta ah. Waxaan aaminsanahay Marxaladda koowaad ee baakada siyaasadda dhaqaalaha xoojin doonaa warshadaha ee qaranka, horumarinta ganacsiga micro, fududeeyo ganacsiga ka dhexeeya gobollada, dalxiiska kicin, wanaajinta daryeelka kalluumaysatada," ayuu yiri.
Madaxweynaha ayaa sheegay in xirmada siyaasadda dhaqaalaha waa xirmo ugu horeysay bilaabay. Xirmada labaad, sida ay Qabanqaabada wasiirka, dhaqaalaha Nasution, waxaa lagu dhawaaqi doonaa todobaadka afraad ee September.
Ka mid ah tiro ka mid ah tallaabooyinka ugu baaqay madaxweynaha, waxaa jira dadaal la doonayo in dhaqaalaha miyiga oo ay dardar iyo fududaynta loo isticmaalin lacagaha tuulo u horumarinta kaabayaasha-degdeg ah shaqada.
Horaantii, Statement Dowladda on Sharciga Qabyada ah ee 2016 xeerka maaliyadda hor xubnaha / MPR ka DPR, August ee la soo dhaafay, qaybinta miisaaniyadda iyo xawaalad gobollada iyo tuulooyinka lagu wanaajin doonaa si ka sii weyn tahay faqri wasaaradaha iyo hay'adaha.
In miisaaniyadda qabyo 2016, kharashka dawladda dhexe gaari doonaa RP 1339,1 trillion, faahfaahinta wasaaradaha iyo hay'adaha kharash-gaaro Rp780,4 trillion iyo kharashka wasaaradaha iyo hay'adaha Rp558,7 trillion non.
Kala iibsiga lacag gobol iyo reer miyiga gaaray RP 782, 2 trillion. Fund waxay ka kooban tahay miisaaniyadda kala iibsiga gobolka Rp735,2 trillion iyo tuulada lacag gaaray Rp47 trillion.
Horumarinta kaabayaasha ayaa la filayaa in la wado dhaqaalaha ee tuulada.
Daryeelka ee kalluumaysatada
Marka muujiyeen xirmo siyaasadda dhaqaalaha, sidoo kale waxa kale oo ku xusan daryeelka kalluumaysatada. Qabanqaabada Economic Wasiirka Nasution ayaa sheegay in uu noqon doono siyaasad ah LPG kalluumaysatada.
Nasution tilmaamay in haddii kalluumaysato ah ee badda ku qaatay 30 litir oo Rp207.000 qiimihiisu naaftada, ka dibna la isticmaalayo qalab Converter ah kalluumaysatada LPG kaliya Rp62.100 doono arrintan. Sidaas daraaddeed, marka uu helo kalluumayste kalluun 10kg haddii loo maleeyo in qiimihiisu Rp20,000 halkii kg, wuxuu heli lahaa faa'iido ah Rp137.900.
"Waxay kordhin doontaa wax soo saarka kalluunka qabtay waqti isku mid ah hagaajinta daryeelka kalluumaysatada," ayuu yiri Nasution.
Ayaa la filayaa in ay sii daayaan xirmo siyaasadda dhaqaalaha, dakhliga guud kordhin doonaa awoodda wax iibsiga ee ku xoogaystay.
Siyaasadda dhaqaalaha xirmo mugga laba liisan goo
Sida laga soo xigtay Bloomberg, Rupiah ku Doolarka Maraykanka ayaa Talaadadii (09/29) taabtay Rp14.818 US $ 1 per.
Dowladda Indonesia sii daayay laba marxaladood ee baakada siyaasadda dhaqaalaha ku jira talaabooyin dhowr ah si loo xaliyo caqabadaha maalgelinta iyo liisan.
Tallaabooyin looga dhawaaqay iyada oo la raacayo boqortooyadii reer shaqo dhawr wasaaradood, oo ay ku jiraan Wasaaradda Degaanka iyo kaymaha iyo Wasaaradda Maaliyadda ayaa Talaadadii (29/09).
Ugu Wasaaradda Degaanka iyo kaymaha, tusaale ahaan, sheegashada Wasiirka Siti Nurbaya ka dhigi doonaa afar u ogolaan isticmaalka alwaaxda wax soo saarka kaynta galay liisanka la odhan jiray "Fasax isticmaalka Timber".
Goor danbe oo boqortooyadii reer Wasaaradda Maaliyadda, Bambang Wasaaraha Brodjonegoro sheegay siin lahaa dhiirigelin cashuurta dhoofinta ubaxyo in ay si baxa dhoofinta (dhe) ee bangiyada ee dalka muddo dheer.
Xirmo Burcad dhaqaalaha iyada oo hoos u dhac ku kaydka iyo qiimaha sarrifka yimaado.
Sida laga soo xigtay Qabanqaabada Wasiirka Nasution dhaqaalaha, siyaasadda xirmo mugga laba diirada saaraya habboonaan iyo goobaha maaliyadeed si loo dhiiri socodka maal-gelin Indonesia.
"Ma u baahan tahay badan oo haatan, taas oo laad muhiim ah. Mid ka mid ah laad in maalgashiga adeeg deg deg ah," ayuu yiri Nasution.
Xoghayaha Xukuumadda Pramono Agung ayaa sheegay in dowladda dhexe ku hanuunin doonaa maamulka deegaanka si ay u soo gaabin geeddi-socodka sameynta liisanka ganacsiga ah.
"Dhamaan waa in la siiyo calaamad wanaagsan in bulshada iyo dalalka deriska ah in saaxiibo Indonesian leh cid kasta oo rabta in ay maal-Indonesia," ayuu yiri Pramono.
Laba marxaladaha kala duwan ee xirmo siyaasadda la bixiyay seddex isbuuc ah ka dib markii baakada siyaasadda hore ayaa la sii daayay on September 9 ee la soo dhaafay.
Xirmada hore waxaa ka mid ah boost a in tartan ee warshadaha qaranka iyada oo loo marayo habaynta, sharci fulinta iyo si yaqiin ah ganacsiga.
Xirmada imanaya xilli itaal Rupiah ah. Sida laga soo xigtay Bloomberg, Rupiah ku Doolarka Maraykanka ayaa Talaadadii (09/29) taabtay Rp14.818 US $ 1 per.
Saddex dhibcood oo ku saabsan mugga baakada dhaqaale 3
Dowladda Jokowi ku dhawaaqay xirmo dhaqaale mug 3. Sidee ku jira baakada waa dhameystiran?
Xoghayaha Xukuumadda Pramono Agung u dhiibay dhawaaqay hordhaca Economic Policy Xirmada III, oo jooga xafiiska madaxtooyada, Jakarta, October 7
Jakarta, Indonesia - Kooxda ayaa dhaqaale ee Madaxweynaha Joko "Jokowi" Widodo ku dhawaaqay muda xirmo dhaqaale 3, Wednesday, October 7th. Farriinta xoojiyo tartan ee aduunka ganacsi ku dhex hoos u dhaca dhaqaalaha ee.
"Waxaan aaminsan nahay 'laad' saddexaad heerka siyaasadeed qorshahan. Hawl-wadeenada waxaan dareemaynaa maanta, halkaas oo Rupiah ayaa si weyn u xoojiyey, "ayuu yiri Taliyaha Xoghayaha Xukuumadda Pramono Agung Wibowo, ee Palace Gobolka galabnimadii Arbacada.
Dhaqaalaha Qabanqaabada Wasiirka Nasution ku daray in mugga saddexaad ee xirmo tani waa niyad lahayn si loo dhimo kharashka shirkadda.
Halkan, saddex arrimood oo muhiim ah oo la xidhiidha xirmo dhaqaale.
Hoos u dhac in qiimaha saliidda shidaalka (BBM), gaaska, korontada iyo
Qiimaha shidaalka diyaaradaha, kobarka, gaaska shidaalka (LPG) 12 kiilo, Pertamax oo wax ku ool ah Pertalite hoos tan iyo October 1, 2015.
Qiimaha shidaalka naaftada ayaa waxaa hoos u RP 200 litir, sidaa qiimaha tafaariiqda ah noocyada shidaalka naaftada kabay noqon doonaa RP 6,700 halkii litir.
Hoos u dhac in qiimaha shidaalka naaftada ayaa sidoo kale codsan doona in nooca shidaalka naaftada ah oo aan la taakuleeyo ah.
Premium qiimaha shidaalka weli RP 7,400 halkii litir (Java, Madura, Bali) iyo RP 7,300 (ka baxsan Java, Madura, Bali). Qiimaha cusub waa ansax ah bilaha Oktoobar ilaa Disembar 2015.
Qiimaha Gaas. Qiimaha warshadda beeraha ka gaaska cusub ayaa lagu wadaa in la raacayo awoodda wax iibsiga ee warshadaha bacrimin ah, taasoo noqonaysa in US $ 7 MMBtu (million Units British kulul). Inkasta oo qiimaha gaaska u warshado kale (sida kiimikada, dhoobada, iwm) waa la dhimi doonaa iyada oo la raacayo kartida warshadaha ay ka soo jeedaan.
Qiimo dhimis Gas waxaa suurto geliyey soo qaadista heerka nidaamka qaybinta gaaska iyo sidoo kale hoos u dhac ku dakhliga dawladda, ama dakhliga Non-Tax (non-tax) gaaska.
Si kastaba ha ahaatee, xukuumaddu u aragto hoos u dhaca qiimaha gaaska ma saamayn doonto qadarka dakhliga in qayb ka mid ah shirkadda gaaska Iskaashiga Contract noqday. Hoos u dhac A ee qiimaha gaaska ee warshadaha wuxuu noqon doonaa wax ku ool January 1, 2016.
Qiimaha korontada. Korantada oo u warshadaha macaamiisha I3 iyo I4 yaraan doonaa by USD 12 - USD 13 kWh soo socda hoos u dhaca qiimaha saliidda (Automatic canshuur qabsiga). Heerka sicir-dhimista waxaa la siin doonaa ilaa 30 boqolkiiba isticmaalka korontada habeenbadhkii (23.00) ilaa subaxda (08:00), marka load nidaamka korontada ay yar tahay.
Dhiirigelin Dowladda dib u bixinta biilka korontada ilaa 40 boqolkiiba biilka korontada 6 ama 10 bilood ee ugu horeysay, iyo warshadaha ee u bixin karaa si tartiib tartiib ah. Tani waxay si gaar ah u khusaysaa warshadaha badani ku hawshoodeen, iyo sidoo kale tartan warshadaha waa itaal daranyahay.
Expansion ganacsatada qaata Dadka Business Credit (KUR)
Si loo hagaajiyo galaangalka ee ganacsatada si credit bangiga, iyada oo barnaamijka KUR ah, dowladda ayaa hoos u dulsaarka KUR ka ku saabsan 22 boqolkiiba illaa 12 boqolkiiba.
In baakada siyaasadan, qoysaska haysta dakhli joogto ah, waxay heli karaan KUR u ganacsatada wax soo saar leh.
Iyada oo siyaasadan, bangiyada KUR dadaalka-dega wado bixiyaan in qofka aad la hadlaysaan, si ay u kordhin doonaa ka qaybgalayaashu KUR halka dhiiri koritaanka ganacsi oo cusub.
Fududeynta ee ansixinta dhulka hawlaha maalgashiga
In qaybta dalkii, Wasaaradda Beeraha iyo astaanta Qorshaynta / Wakaaladda Qaranka ee Dhulka, dib No. Regulation 2 2015 ee Heerarka Adeega iyo Shuruucda Beeraha, astaanta iyo Land ee Investment Activity.
Qaar ka mid ah walxaha heshiis cusub oo ka mid ah waxyaabaha sida:
a. Codsadaha u hesho macluumaad ku saabsan helitaanka dhulka (asalka 7 maalmood ilaa 3 saacadood);
b. Dhamaan codsiyada ka diiwaan gashan yihiin sida nooc ka mid ah si yaqiin ah ee codsadayaasha ee la heli karo iyo isticmaalka dhulka qorshayaasha. Waraaqaha la daabacay 3 saacadood gudahood.
c. Dhammaystir mabaa'diida liisan la siiyay foomka, soo jeedinta, samaynta shirkada, xuquuqda dhulka noqon shuruud u ah in ay bilaabaan hawlaha beerta. Looga baahan yahay kor u ah in la raaco karaa ka hor inta aan la soo saarin ee qadaridda on Isticmaal Rights Land.
d. The waqtiga dayactirka (baahan yahay waa in dhamaystiran):
Hak Guna Usaha: 30-90 maalmood ka ilaa 20 maalmood oo shaqo (ilaa 200 oo hektar), ama 45 maalmood oo shaqo (> 200 hektar)
Extension / Renewal HGU: 20-50 maalmood ka ilaa 7 maalmood oo shaqo ah (ilaa 200 oo hektar), ama 14 maalmood oo shaqo (> 200 hektar)
Codsiga Ka Yeeshay / Xaqa Isticmaal: 20-50 ka maalmood ee la shaqeeyo 20 maalmood oo shaqo (ilaa 15 hektar) ama 30 maalmood oo shaqo (> 15 hektar)
Extension / Renewal Ka Yeeshay / Xaqa Isticmaal: 20-50 ka maalmood oo shaqo in ay 5 maalmood oo shaqo (ilaa 15 hektar) ama 7 maalmood oo shaqo (> 15 hektar)
Xuquuqda Land: 5 maalmood oo shaqo inay 1 maalin oo shaqo
Dejinta cabashada: 5 maalmood oo shaqo inay 2 maalmood oo shaqo
e. In dheeraad ah oo loo isticmaalo xuquuqda dhulka lagu saleeyay qiimayn ka mid ah maamulka iyo isticmaalka dhulka (oo ay ku jiraan Hanti badan) by dalkii la xiriira sida looga baahan yahay petition hore hadda lagama isticmaalo.
Senior Guddoomiye Ku-xigeenka Bangiga Indonesia Adityaswara Mirza ayaa sheegay in xaaladda hadda jirta suuqa dhaqaale ayaa kor u sabab tahay arrimaha dibadda iyo gudaha ah.
Arrimaha Dibadda, Mirza ayaa sheegay in tirooyinka dhaqaalaha United States waxaa soo yara daciifnimo, gaar ahaan qaybta ku hawshoodeen. Waxa kale waa cidhibta ee u kaca ee dulsaarka uu bilaabay in uu baddalo. "Markii hore ka qaybgalayaashu suuqa badan saadaaliyo kaca dulsaar Caal ah ee October ama December, laakiin sida muuqata uu saadaasha in ay 1-dii bilood ee sannadka soo socda ama 2aad bedelay," ayuu yiri Mirza.
Tallaabadan waxaa keentay inay dib usoo, si caleema saarka oo kii bilood ee qaar ka mid ah hore ayaa horaantii dollars iibsaday, hadda waa in la gooyaa khasaaraha.
Si arrimaha gudaha, suuqa jawaab wanaagsan ka xirmo siyaasadda kkonomi hore, labaad, iyo kii saddexaad. Baakadaha waxay muujinayaan go'aankii dawladda ee dib u habaynta dhaqaalaha.
"Mudada fog, xirmo siyaasadda in ay awoodi karto in la yareeyo bararka," ayuu yiri Mirza.
Xukuumaddu waxay bilowday xirmo siyaasadda dhaqaalaha afaraad
Shaqaalaha daryeelka noqon diiradda xirmo siyaasadda waqtigan ka
Jakarta, Indonesia - Dowladda ayaa bilaabay xirmo afar muda siyaasadda dhaqaalaha on Thursday, October 15, 2015. diiradda ugu weyn ee xirmo siyaasadda waqtigan waa daryeelka shaqaalaha iyo horumarinta Micro, Yaryar iyo kuwa Dhexdhexaadka (SMEs).
Si loo hubiyo daryeelka shaqaalaha, dowladda dhaqan galin doonta qaab cusub si loo xisaabiyo lacagta la mid ah mushaarka ugu hooseeya ee Gobolka (UMP)
"Dawladdu waxay u jiraa si loo hubiyo in shaqaalaha in aynaan ku dhicin in mushaharka ugu yar yahay, laakiin sidoo kale loo shaqeeyayaasha yaqiinin," ayuu yiri Qabanqaabada Wasiirka Nasution Dhaqaalaha ee shirkiisa jaraa'id.
Sida horumarinta qaybta SME, pemerintahkan Qorshaha qaybinta dib soo jeediyey in aad isku dejiso Dadka Business Credit (KUR) iyo siin deyn magaalada ka shaqeeya in SMEs alaabta la dhoofiyo saarayaasha.
Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah dhibcood ku xirmo afaraad ee siyaasadda dhaqaalaha soo bandhigay by Nasution, Wasiirka Shaqaalaha iyo Wasiirka Maaliyadda Hanif Dhakiri Bambang Brodjonegoro,
Qabanqaabada Wasiirka Nasution Dhaqaalaha:
1. Mushaharka shaqaalaha dhab ahaan kor u bixin oo sanad kasta.
2. Dawladda ayaa ka jira si ay u caawiyaan shaqaalaha yareeyo culayska kharashka naftiisa ayuu shabag ammaanka oo ah qaab waqtiga la mid ah oo Indonesia Smart Card iyo Card Healthy Indonesia.
3. Formula UMP: mushaarka ugu hooseeya ee sanadkan lagu daray heerka sicir bararka iyo kobaca dhaqaalaha (boqolkiiba). Formula Taasi ma khuseyso ee siddeeda gobol ah in mushaharka ugu yar ee hadda weli wuu ka hooseeyaa Baahiyaha noolaanshaha (KHL).
Wixii sideed ka mid ah gobolka, waxaa lagu siin doonaa marxalad kala guur ah oo afar sano. Wixii afar sano, mushaharka ugu yar waxaa qaadandoonaan ku darsan oo dheeraad ah ay ku buuxin karaan goolasha ay la qiimo ah KHL
Wasiirka Shaqada Hanif Dhakiri:
1. Qiimeynta Baahida noolaanshaha (KHL) waxaa lagu fulin doonaa shantii sanoba mar. Tani waa sababta Sidaas waxa muujiyay suaalo Bureau of Statistics Bartamaha (BPS), qaabka isbedelada isticmaalka dhacay shan sano oo kasta.
2. In mustaqbalka, waxaa waajib ma shirkadda in la dhiso qaab-dhismeedka iyo miisaanka mushaarka. Waxaa loola jeedaa in mushaharka loo tixgeliyo mid ah ka shaqeeya da'da, aqoonta, waxbarashada, guulaha iyo waxqabadka. Waa in xeerka laftiisa waxaa nidaaminaya doonaa.
Wasiirka Maaliyadda Bambang Brodjonegoro:
1. La Xiriira shaqeeya deyn caasimada in SMEs alaabta la dhoofiyo saarayaasha, Dhoofinta Indonesian Maalgelinta Agency (LPEI) ku sameeyeen khariidaynta. Natiijadan ayaa waxaa jira 30 shirkadood in ay leeyihiin awood u leh in la helo deyn magaalada ka shaqeeya.
Dhiirigelin Tax Sidaas Focus Economic Policy Xirmada Volume V
Xirmada siyaasadda dhaqaalaha ee dawladda ay sii wadi doonaan in la xoojiyo xasiloonida dhaqaalaha iyada oo u dhacooda dhaqaalaha adduunka kaas oo sidoo kale saameyn ku Indonesia, adkaysatay Madaxweynaha Joko Widodo ayaa sheegay in ka dib markii kulan kooban golaha wasiirada galabnimadii Khamiista (22/10).
Nasution wasiirka dhaqaalaha ee xafiiska Madaxweynaha ayaa ku dhawaaqay xirmo siyaasadaha dhaqaalaha vol 5, ee Jakarta Thursday, October 22, 2015 (VOA / Andylala).
Dhaqaalaha Siyaasadda Xirmada 4 Focus Dhibaatada Mushaharka iyo Dadka Business Credit
Dawladda ayaa soo saartay shan mugga baakada siyaasadda dhaqaalaha ah si kor loogu qaado dhaqaalaha gudaha. Xirmo Policy in ay diiradda dhiirigelin dowladda la xiriira hoos u dhaca canshuurta.
Wasiirka Arrimaha Dhaqaalaha Nasution oo jooga xafiiska madaxtooyada ee Jakarta ayaa Khamiistii (22/10) ayaa sheegay in siyaasaddii ugu horeysey ee waa arrin dhiirigelin gargaarka canshuurta ee revaluation hantida shirkadda, labada State leedahay Enterprises ee (Søes) iyo dhinacyada gaarka ah. Nasution sheegay in shirkaddu ma rabaan in ay sameeyaan revaluation hantida sababtoo ah heerka canshuurta waa heer sare ah oo ku filan. Oo isna wuxuu yidhi, haddii revaluation hantida lagu sameeyo, gaar ahaan hantida hantida, waxaa ka dhigi kartaa qiimaha hantida shirkadda korodhay.
"Waa hagaag, haddii ay sameeyaan revaluation ka dibna, waxa uu kor u qaadi doonta awoodda. Waxay abuuraysaa awoodda iyo waxqabadka dhaqaalaha kordhay xaddi weyn oo. Dhab ahaantii waxa uu ahaa in sano ka dib ka dhigi kartaa faa'iido weyn. Total hantida u kordhin doonaa. Dhahdaa 100%, ama 200 %, waxa ay noqon kartaa in ka badan, "ayuu yiri Nasution.
Waxa la mid ah ayaa la gaadhsiiyey Wasiirka Maaliyadda Bambang Brodjonegoro, oo sheegaya revaluation waa kumeelgaar ah qiimaha hantida shirkadda oo waafaqsan qiimaha hadda cadaalad ah. Bambang sharaxay, sida caadiga ah canshuurta dakhliga (VAT) ujeeddo ah revaluation hantida ku khasban 10 boqolkiiba, laakiin heerka gooyay muddo go'an.
"Wixii canshuur (WP), xaraysan revaluation hantida ilaa December 31, 2015 qadarka qiimaha gaarka ah revaluation canshuurta dakhliga final waa ka caadi ah 10% 3% ah. Haddii ay soo gudbiyeen in muddada January 1st si June 30 2016, xaddiga la'aan waa 4%. Marka buuxinta July 1 ilaa December 31, 2016, xaddiga ugu dambeeya ee heerka gaarka ah ee cashuurta dakhliga ilaa 6% revaluation, "ayuu yiri Bambang.
Siyaasadda labaad ee xirmo mugga 5 waa tirtiridda canshuurta laba heshiis maalgashi guud ee lacagaha maalgashi dhab ah ama loo yaqaan REITs (Real Estate Investment Trust). Sida laga soo xigtay Bambang ka mid ah securities caadiga ah ay soo saartay shirkadda damiin ama ku lammaan hanti sida hanti ama kaabayaasha.
Bambang ku daray, "Iyada oo PMK ah in aan dhawaan ka dibna canshuurta laba qarashgareyn doono toddobaadka soo socda, gaar ahaan shirkadaha leh ujeedo gaar ahaan akandihilangkan canshuurta hal. Sidaas waxaa la filayaa joogitaanka qalabkani KIK Dire u muuqan kara in suuqa caasimada Indonesia, iyo in uu soo jiito maal- Tani waxaa lagu samayn. "
Dhanka kale, Financial Services Authority (FSA) ayaa sidoo kale soo saaray siyaasad cusub oo diirada saaraya bangiyada Islaamka. Guddoomiyaha Guddiga Komishanka FSA, Muliaman D. Hadad, siyaasad cusub waa muhiim sababtoo ah afar xirmo hore siyaasadda sii daayay ay FSA, Bank Indonesia (bi), iyo dowladda ayaan weli si ay u gaaraan qaybta idil dhaqaale.
Sida laga soo xigtay Hadad, warshadaha shareecada waxaa kama helin qayb.
"Marka hore, waa fudayd ee alaabta iyo hawlaha bangiyada Islaamka. Farsamo ee liisan iyo kharashka wax soo saarka Islamic noqon doonaa mid sahlan. Iyadoo disederahanakan, markaas waa wax loo baahan yahay si aad u weydiiso fasax warqad sababta oo ah waxyaabaha shareecada la degsan doonaa buug diro. Haddii badeecada hore u jirin, muhiim ma aha liisanka mar kale, kaliya waxa ay soo sheegaan, "ayuu yiri.
Farsamo Licensing waxyaabaha kale ee ku jira baaxadda shareecada sii Hadad, waxaa ka mid ah shareecada dahab dhilif, kaas oo sidoo kale ma u baahan tahay inaad weydiiso ogolaansho.
Shir jaraa'id oo ka qayb galay dhowr wasiir, oo ay ku jiraan Qabanqaabada Wasiirka Maritime Rizal Ramli Wasiirka Dhaqaalaha arrimaha Nasution,, Guddoomiyaha Bangiga Indonesia Agus Martowardojo, Wasiirka Maaliyadda Bambang Brodjonegoro iyo Guddoomiyaha Hadad Authority Financial Services FSA ku Hadad ahaa - Madaxweynaha Joko Widodo dowladda samayn lahaa wax walba oo suuragal ah si loo xoojiyo yiri xasiloonida dhaqaalaha iyada oo u dhacooda dhaqaalaha adduunka kaas oo sidoo kale saameyn ku Indonesia.
Madaxweynaha ayaa sidoo kale hubisaa xirmo siyaasadda dhaqaalaha ee dawladda ay sii wadi doonaan.
"Sidaa darteed, xirmo ay sii wadi doonto in ay ku talaabsato Bank Indonesia ayaa sidoo kale la FSA ah. From 1,2,3,4,5 la sii wadi doonaa la 6,7,8 laga yaabaa ilaa 100. Waxaa laga yaabaa in ilaa 300 200. umpteenth laga yaabaa. Laakiin cad, joogta ah ee aannu mar ayaa waxaa doonaya in la siiyo dareen xooggan oo ah in aan qoresheyneyno in aan baddalno asaaska u ah dhaqaalaha dalka. Kuwaasoo dabcan waxaan doonayaa in dadweynaha iyo ganacsatada ku garanaynaa inaynu sii wadi doontaa in ay ka shaqeeyaan xeer mereform iyo bureaucratization, "ayuu yiri Madaxweynaha. (VOA)
Xirmo dhaqaale lixaad for 'xaafada'
Zones Dhaqaalaha Gaarka ah ayaa la filayaa in uu soo nooleeyo dhaqaalaha ee meelaha miyiga ah.
Lix marxaladaha kala duwan ee baakada siyaasadda dhaqaalaha, iyo kuwo kale, si toos ah isku day la doonayo in dhaqaalaha ee xaafad, ayaa sheegay in wasiirka dhaqaalaha Nasution.
Intaa waxaa dheer, Wasiirka Iskudubaridka (Qabanqaabada) Arrimaha Dhaqaalaha Nasution sheegay xirmo siyaasadda dhaqaalaha waqtigan ayaa sidoo kale diirada saaraya cashuur, maamulka khayraadka biyaha, iyo daawada.
"Si fudud, iyada oo la socota, waxa jira goobo ka tirsan degaanka ka go'an in ay noqon Zone Gaarka ah ee Ganacsiga (SEZ), kaasoo ujeeddadiisa ugu muhiimsani waa in la farsameeyo khayraadka jira gobolka iyo meelo ka baxsan," ayuu yiri Nasution at xafiiskiisa, Khamiistii (5/11) ,
Goobaha dhaqaalaha gaarka ah
SEI Mangke iyo Tanjung API-API (North Sumatra)
Haddaba kuwanu sideed aag dhaqaale oo ay aasaaseen xeerka dawlada gelin meelo gaar ah in la hormarin doona, kuwaas oo Tanjung Lesung ee gobolka Banten, SEI Mangke iyo Tanjung API-API (North Sumatra), Palu (Central Sulawesi), Bitung (North Sulawesi), Mandalika ( West Nusa Tenggara), Morotai (North Maluku), iyo Maloy Batuta Trans Kalimantan (Kalimantan Barat).
Goobaha dhaqaalaha gaarka ah ee la bixiyo xarumaha kala duwan ee dhiirigelin canshuurta, gaar ahaan wershadaha in ka arrinsashada khayraadka deegaanka ku xeeran KEK iyo buuxiyaan shuruudaha ku cad.
"Tani waa in la dhiiri geliyo in lays ee ganacsiga iyo warshadaha cimilada waa wanaagsan yahay," ayuu yiri Nasution.
Nasution ayaa sheegay in siyaasadda waqtigan ayaa sidoo kale waxaa ka mid ah maamulka khayraadka biyaha iyo sidoo kale arrimaha la xidhiidha cuntada iyo daawada waxaa qabta BPOM.
Dowladda Madaxweyne Jokowi ilaa hadda ayaa bilaabay xirmo ka kooban lix siyaasadda dhaqaalaha.
Dhinaca maamulka khayraadka biyaha, xukuumaddu ka qafaasha siyaasadeeda on go'aanka Maxkamadda Dastuuriga ah in aan u oggolayn maamulka ganacsiga khayraadka biyaha ganacsiga gaarka loo leeyahay.
Si kastaba ha ahaatee, marka go'aanka maxkamadda u soo dhaadhacay, xukuumadda ayaa fasax loo siiyay inuu kala duwan oo ka mid ah shirkadaha, ma ahan oo keliya shirkadda biyaha dhalada.
Sidaa darteed, ayaa sheegay in Nasution, shirkadaha ay sii wadi doonto in ay ka shaqeeyaan in rukhsadda waafaqsan "ilaa liisanka dhacayo ama ilaa uu jiro sharci cusub".
About qaanuunka cuntada iyo daawada, Nasution bandhigan dejinta daroogada fududeynta liisanka.
Tani waa xirmo ka kooban lix siyaasadaha dhaqaalaha fulinayaan xukuumadda tan iyo markii Madaxweynaha Jokowi sameeyo golaha wasiirada prombakan.
La joogo ugu horeysay Diiluncurkan, Nasution sheegay in xirmada ay u habeynta dhaqaalaha loo baahan yahay in ay dib u soo kaxayno dhaqaalaha waxaa ayuuna sanadkan.
Badeecadaha beero 5 Indonesia dunida
Waxaan ku faanayaa waa in jirsado qaar ka mid ah wax soo saarka beeraha iyo ka leexsan Indonesia waa mid aad u heer caalami ah. Iyada oo dhulka qarqinaya hadda jirta ee ka dibada laga keeno badeecadda, beeraha iyo badeecadaha leexsan weli waa badeecad saaxadda caalamka. Markan waxaan wax yar ee dunida oo dhan ayaa ka fiirsan doona 5 badeecadaha beeraha iyo ka leexsan Indonesia.
Indonesia naftayda saaray sida soo saare ah oo saliid ah oo timir ah cayriin ee dunida oo dhan. Sanadkii 2011 Indonesia qabsato suuqa adduunka oo saliid ah oo timir ah cayriin ah 47% inuu dhaafo Malaysia meel 2aad iyadoo 39%. Dhoofinta oo saliid ah oo timir ah ka geysan karaan sarrifka dalka dibadda ee USD 14 bilyan ee 2010 waxaana la filayaa inuu si weyn u kordhin ka ketahunnya sano.
Tan iyo waqti aan la xusuusan, Indonesia waxay caan ku tahay dhirta udgoon oo ay. Dhirta Spice in badhaadho ee Indonesia inay soo jiitaan quruumaha kale inay menguasainnya. Waa lama huraan in la soo dhaafay quruumo badan shisheeye qani ah iyada oo sababtu tahay dhirta udgoon oo ka Indonesia, oo qiime aad u sarreeya. Ilaa iyo hadda, Indonesia u dhoofisaa weyn oo dhir udgoon oo adduunka ah, oo ay ku jiraan xawaashka ah (no. 1), qorfe (no. 1), toon ah (no 1) iyo basbaas (no. 2).
Indonesia waa No. 3 ee kookaha adduunka ka dib markii Ivory Coast iyo Ghana. Production sii kordheysay celcelis ahaan 3.5% sanadkiiba, 2014 xukuumadda ay ka go'an tahay in ay badiso labada dal u darajo ugu horeysay soo saare ee adduunka ee kookaha ugu weyn. Sanadkii 2010-saarka kookaha Indonesian gaareen 574 kun oo tan, lagu tiriyaa 16% ka mid ah wax soo saarka kookaha adduunka, halka Ivory Coast ay baxaan marka hore la 1.6 million tons, lagu tiriyaa 44%.
Indonesia waxay kaalinta labaad ka dib markii Thailand qeybiyaha ah ee caag cayriin. Waxaa jira xuso Indonesia sida xanjada Carabi adduunka. Inkastoo marka la eego tirada iyo wax soo saarka beeraha caag, laakiin caag ah Indonesian calaamadeeyey tayo leh kaga badiyeen caag ka Thailand. Sanadkii 2011, wax soo saarka caag ee Indonesia gaaray 2.8 million tons.
Indonesia ayaa haatan kaalinta saddexaad soo saare sida qaxwada adduunka hoos Brazil iyo Colombia. Wax soo saarka kafeega Basarnya Indonesia ee sannadkii celcelis ahaan 600 kun oo metric. Laga soo bilaabo tiradaasi Indonesia siin 7% ee kafeega ee adduunka ee.
Soo saaridda Exchange halbowlaha
Menpar sheegay Indonesia ka xoogbadan, marka la eego meelaha loo dalxiiso, qiimaha dalxiiska iyo dalxiiska mudnaanta tartan rasmi ah.
Indonesia Haddaba sidaas daraaddeed ayaa soo saarayaasha waaxda dalxiiska halbowlaha DevisaGili Lawa Dalat, Lombok, Indonesia (Michele Westmorland / Corbis)
Wasiirka Dalxiiska Arief Yahya sheegay in xukuumaddu ay dib-u-dhiso dalxiiska sida qaybta weyn, oo lala yeesho qaybaha hogaaminayaa sarifka lacagaha qalaad mushaharka Indonesia.
Waxaa lagu wadaa kulan gaar ah u xiran ee dalxiiska ee AHN Madaxtooyada, ayaa Isniintii (16/2), oo lagu soo bandhigay furitaanka Shirka Qaranka oo ka mid ah Ururka Indonesian Hotels iyo Makhaayadaha, Talaadadii (17/2).
"Saamaynta ay uga go'an tahay sida, markii gobolka ayaa la filayaa in uu noqdo ah meelaha istaraatiijiga ah ee qaranka, qaybaha taageeri lahaa qorshe ah in tusaale ahaan Wasaaradda Hawlaha Guud hagaajin doonaa waddooyinka," ayuu yiri.
Wuxuu intaa ku daray in Indonesia dhab ahaantii waxay leedahay faa'iidooyin marka la eego meelaha loo dalxiiso, qiimaha dalxiiska iyo dalxiiska mudnaanta tartan rasmi ah.
Iyada oo dhanka kale, Ariel by Travel xogta iyo Dalxiiska Index tartanka ururisey World Economic Forum ayaa shaaca ka qaaday, Indonesia waa darajo 70 ka mid ah 140 dal.
"Waxaan hagaajin doonaa dhiman ee dalxiiska sida kaabayaasha dalxiiska, teknoolajiyadda macluumaadka iyo dalxiiska, oo nadiif ah" ayuu hadalkiisa raaciyay.
Tan, ayuu hadalkiisa ku daray, ahaan dhibaatada ugu weyn. Waxay rajaynayeen dalxiiska Indonesian si degdeg ah kori doono oo noqon warshadaha halbowlaha ee Indonesia ah ee intaa dheer in saliidda, gaaska, iyo saliidda oo timir ah.
TKI gacan State Dibadda Exchange ka dib markii Oil labaad ee ugu weyn iyo Gas
sarifka lacagaha qalaad oo ka soo jeeda Shaqaalaha Indonesian (TKI) wali labaad oo kaliya in ay waaxda saliidda iyo gaaska (saliidda iyo gaaska).
Sanadkii 2009 oo keliya shaqaalaha shisheeye soo galootiga iyada oo loo marayo bixinta lacagaha dalka ku soo gaadhay US $ 6,617 bilyan.
"Shaqaalaha Migrant gacan ka sarifka lacagaha qalaad labaad ee ugu weyn kadib markii shidaal iyo gaas," ayuu yiri Guddoomiyaha Shift Wakhtiga (ciddiyihii orsada) Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha (Kadin) Adi Putra Tahir in Seminar Qaranka ka rogaan ah Placement iyo Badbaadinta Shaqaalaha Abroad, at Bidakara Hotel, Jakarta, Arbacadii (2/6).
Waxa uu sheegay in meelaynta siyaasadda iyo ilaalinta Indonesian Shaqaalaha (TKI) ayaa weli aan fiicnayn. Markaasuu wuxuu ku yidhi khadkeeda dhibaatada meelaynta iyo ilaalinta shaqaalaha muhaajiriinta ah waa in si wanaagsan loo soo abaabulay dhaqdhaqaaq qaran iyo iskaashi.
"Waxaan filayaa in tani tahay dhaqdhaqaaq qaran, nidaamsan, daneeyayaasha waa inay ku socdaan hammiga. Ma u baahan tahay fiiro gaar ah ka qorista, meelaynta, iyo xataa ilaalinta, "ayuu yiri Adi.
Sida laga soo xigtay Adi, tirada shaqaalaha ee dibada u shaqeeyo oo aan la kala saari karaan shaqo ay dowladda weli xadidan. Saamiga koritaanka dhaqaalaha waxa lagu qiyaasay 6% ayaa weli ma kor u helidda shaqooyin dalka.
Iyada oo ku saleysan xogta ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee tirada shaqaalaha ka shaqeeya dibadda gaareen 3,246 milyan oo qof oo ku baahsan dalal badan. Qayb lacagtaas by 2009 xaaladood oo shaqaalaha muhaajiriinta ah u argaggaxsan gaaray 69 004 oo qof.
Indonesia gelin kara shaqaale ajnabi ah (TKI) ilaa 10 milyan oo qof, ama qiyaastii waxay ahayd shan boqolkiiba dadweynaha.
Arrintan waxa caddeeyay Guddoomiyaha Guddiga Joogtada ah oo ku saabsan shaqada arrimaha dibadda ee Rugta Ganacsiga, Nurfaizi, in seminar ku saabsan shaqaalaha muhaajiriinta ah qaabisay Rugta Ganacsiga ee Jakarta, ayaa Arbacadii (2/6).
Nurfaizi oo sidoo kale ah gudoomiyaha ururka ee Corporate Services TKI (APJATI) ayaa marka la barbardhigo Filibiin, kuwaas oo 10 boqolkiiba dadka uu dibada uga shaqeeyaan.
"Natiijada, Philippines gaadheysa dhaafsadaan ilaa 15 bilyan oo doolar sanadkiiba oo noqday soo saare ugu weyn ee lacagaha qalaad oo dhan ee ay dowladda Philippine," ayuu yiri.
Muddo shan sano ah, ayuu yiri, meelaynta shaqaalaha muhaajiriinta ah ayaa gaaray wareega afar milyan oo qof oo lagu bar si loo kordhiyo ilaa afar milyan oo qof oo ku nool labada sano ee soo socota.
"Taasi waa marka ay taageerto dhinacyada oo dhan iyo dowladda oo joogto ah," ayuu yiri.
Kordhinta tirada shaqaalaha muhaajiriinta ah la koritaanka boqolkiiba 21 bilaabo sanadkii 2004, taasoo noqonaysa in 380 690 oo qof galay 696 743 oo qof sanadkii 2007 dalka caga Bariga Dhexe iyo Asia Pacific.
Nurfaizi sheegay in meelaynta shaqaalaha muhaajiriinta ah ee qaybta aan rasmi ahayn ayaa weli ku badan 78 boqolkiiba, halka meeleynta ee gobolka Asia Pacific ee qaybaha rasmiga ah ay gaari karaan 52 boqolkiiba sannadihii la soo dhaafay.
Guud ahaan, waxa uu sheegay in, waxaa jira tiro sii kordhaysa oo ka mid ah shaqaalaha muhaajiriinta ah oo aan kaliya arkaa guul barnaamijka meelaynta TKI, laakiin sidoo kale tirada sii kordhaysa ee ciidanka shaqada in saami la helidda shaqooyin dalka.
Go'aamadii Shirkii Kemnakertrans xogta, Agaasimaha Guud ee Protocol iyo qunsuliyadaha Arrimaha ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda, Lutfi Rauf, ayaa sheegay in ay jiraan kuwo 2.8 million shaqaalaha muhaajiriinta ah ee muddada 2005-2009 oo leh "Xawaaladaha" (xawaaladaha ee shaqaalaha muhaajiriinta ah ku galeen dalkaasiUganda,) gaaray 6617 oo doolar sanadkii 2009-ilaa 69 004 shaqaalaha muhaajiriinta ah dhibaato inta lagu jiro 2009.
Intii lagu guda jiray 2009, wasaaradda arrimaha dibadda ee isuduwidda la Indonesian Wakiilada ayaa ku guulaysatay fulinta xuquuqda aasaasiga ah ee shaqaalaha la kulma dhibaatooyin dibada xuquuqda aasaasiga ah ee la ururiyey gaareen 326 495 438 750 oo doolar oo doolar Singapore.
In ka-January May 2010, wasaaradda arrimaha dibadda iyo Wakiilada Indonesian ah ayaa si guul leh u fududeeyay fulinta xuquuqda aasaasiga ah ee shaqaalaha muhaajiriinta ah sida ugu badan 156 416 oo doolar, Rp185.736.941, United Arab Emirates dirham 1,845, 4,800 riyal iyo 140,000 oo doolar Singapore.
Wixii kiisas ah shaqaalaha muhaajiriinta ah waxaa ka mid ah mushaar la'aan awgeed, kadeedka galmada, waxaa la bixiyaa mushaaraadka hoose, darxumada, dil, shilalka shaqada, "trafficking" (ganacsiga), xadgudubyada socdaalka, iyo wixii la mid ah.
Lutfi ayaa sheegay in caqabado ay kala kulantay ilaalinta muwaadiniinta, iyo kuwo kale, oo aan la raacayo shuruucda iyo qawaaniinta, Dowladda Indonesia ayaa lahaa heshiis laba geesood ah oo dhan dal ee shaqaalaha muhaajiriinta ah, diro shaqaalaha muhaajiriinta sharci-darrada ah, iyo shaqaalaha kuwaas oo aan awood u.
Wasiirka Arrimaha Dibadda Marty Natalegawa ee dhageysi Guddiga I oo ka mid ah Golaha Wakiilada on December 2nd, 2009 ayaa sheegay in arrinta ah ilaalinta muwaadiniinta Indonesian dibadda ah ayaa mudnaanta leh wasaarada arimaha dibada.
Indonesian dhaqaalaha kaalinta 9 of Adduunka
Mediawarga.info - Bangiga Adduunka ayaa ka dhigeysa Indonesia sida 9aad dhaqaalaha ee ugu weyn dunida oo dhan. Indonesia ee GDP dhamaadka 2014 ka gaadhay US $ 2.55 trillion. Taas inayna GDP ee UK uu ahaa kaliya US $ 2.4 trillion.
Qiimaha dhaqaalaha waxaa loo xisaabiyaa sida natiijada la barbardhigo ah oo awood of alaabo ama adeegyo iibsiga ee dal, nooca badeecada ama adeegyada la isticmaalayo lacagaha la mid ah oo doolar. Ereygan waxa lagu yaqaan hannaanka awoodaynta (PPP) iibsigu. Tusaale ahaan, The Economist la isticmaalayo habka xisaabinta ku saleysan qiimaha McDonald ayaa, loo yaqaan "The Big Mac index" ah.
Oo ah dhaqaaleyahan DBS Bank, Gundy Cahyadi ayaa sheegay in xarunta dhaqaalaha adduunka hadda u wareegaayo ka America iyo Europe inay Asia. Asia ee horumarka beenineyso fikradda ah in dhaqaalaha Maraykanka uu weli yahay awood adduunka ugu weyn keena in koritaanka caalamka. Sida ay natiijada cilmi-baarista ee DBS ka, in mustaqbalka, Asia abuuri doonaa Rafaa dhaqaale oo siman Germany saddex sannadood oo kasta. The Rafaa dhaqaale ee cusub ugu horeysay waxaa la filayaa in ay ka dhacdo sannadka 2023, labaad ee 2031 iyo kii saddexaad ee 2038.
RI dhaqaale ka badan doonaan Australia iyo South Korea ee 2030
Liputan6.com, Jakarta - Dhaqaalaha United States (US) saadaaliyay sii waday inuu muujiyo Lagaga ee 2030. Dhanka kale, dhaqaalaha dalalka soo koraya ka mid ah ayaa sidoo kale la filayaa in ay la kulmaan xowli ah halka qaar ka mid ah dalalka Yurub si dhab ah u simbiriirixan doonaa si hoose.
Sida laga soo xigtay US Department of Agriculture, iyo dalkii reer Adeer Sam ayaa la filayaa inuu sii amiir u ahaa dhaqaalaha adduunka iyadoo wax soo saarka gudaha (GDP) in ka 15 sano ee soo socda waxaa la saadaaliyay in Mareykanka ay gaaraan $ 24.8 trillion, kor u US $ 8 trillion marka loo eego saadaasha ah GDP ee Mareykanka sanadkan ee $ 16 8 trillion.
Dhanka kale, booska labaad ayaa waxaa kujira Shiinaha ay GDP kori doono Saadaasha labo jeer in sanadkan US $ 22.2 bilyan oo caawin yareyso farqiga dhaqaale ee u dhaxeeya Maraykanka iyo Asia guud ahaan.
Kaalinta Sedaxaad ayaa waxaa kujira Hindiya oo la saadaalinayo in 2015 oo keliya ku dhameysatay kaalinta shanaad GDP ugu wayn adduunka. Halka ee 15 sano ee soo socda, Hindiya ayaa la filayaa inuu dhaafo Brazil, England, France, Germany iyo Japan. Hay'adda Lacagta Adduunka (IMF) ayaa sheegay in dalka uu yeelan doono ciidamada ugu badan shaqada adduunka ee 15 sano ee soo socda.
Iyadoo Japan ayaa la qiyaasaysaan inaan dal yar nasiib. Sababtoo ah ka dib markii ay dhaqaalaha ugu duulay ee 1990 iyo khibrad waji fadhiya, koboc dhaqaale Japan ayaa noqon doona mid gaabis ah, qasbo Japan ayaa kaalinta u dhacday kaalinta afaraad ee liiska wadamada la ugu dhaqaalaha adduunka 2030.
"Japan waa cashar muhiim ah in sida ugu dhakhsaha badan ee aad la kulmi karaan kolba la xiriira qaab dhismeedka dhaqaalaha," ayuu yiri JP Morgan dhaqaalaha Bruce Kasman sida laga soo xigtay Bloomberg, ayaa Axaddii (04/12/2015).
Japan ka sokow, France ayaa sidoo kale saadaaliyay in ay hoos u saddexda boos in falan 8 la PBD US $ 3.3 trillion iyo Italy ku dhacay laba meel oo aad booska 11aad la GDP ah US $ 2.3 trillion.
Dhanka kale, dhaqaalaha dalka Indonesia oo la saadaalinayo in la gashay kaalinta 13 ee liiska wadamada la ugu dhaqaalaha la GDP ah US $ 2.1 trillion ah ee 2030-ka, in ka badan Australia ee booska 14 iyo South Korea ee kaalinta 15aad iyadoo GDP ah US $ 1.9 trillion.
"Waxaa jira wax badan oo aan la hubin. Ma Shiinaha ay awoodaan in ay koraan 4 boqolkiiba iyo 6 boqolkiiba, waxaa jira waxyaabo badan oo in la eego waxa ay noqon doontaa in dhaqaalaha caalamiga ah. Ama haddii Hindiya koraan karaan 3 boqolkiiba iyo 8 boqolkiiba. Tani waa farqi aad u weyn marka aad isu geeyo waqti jir ah, "ayuu yiri.
Guud ahaan, Jamaica oo la saadaalinayo in ay booska ugu hooseeya si ay u daadiyeen sida ugu badan ee 13 ilaa dhig 136 ee 2030. Inkastoo Uganda noqon doontaa dalkii la horumarka ugu weyn tan iyo markey Mixraabka 18 Jannooyinka in ay booska 91.
Gulberg Greens February 9, 2020 at 10:54 PM